MARA UKMIL AS Puma HC1 FSX - Rikoooo
downloads 31 569
The SA.330 puma bụ a french ọkara sized obodo na agha iga helikopta. mere site "Sud Aviation" na developped site "l'Aerospatiale", e ji wuo ya na mmekota nke "Westland Helikọpta". Mgbe ọ na e kere 1990, "Eurocpoter" persued ya développement, renaming ya "Cougar" n'ihi na ya agha version.
Atụmatụ 6 textures na 2 ụdị. Mara mma craftmanship.
-Agụ akwụkwọ ntuziaka maka ozi ndị ọzọ.